Arsene Wenger: 'Alexis Sanchez wuxuu ku guuleysan doonaa kalsoonida taageerayaasha'
Friday, June 22nd, 2018 - 15:48:30
Saturday September 09, 2017 - 22:52:41 in Wararka by MM Shooble
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in Alexis Sanchez uu ku soo laaban doono kooxda Gunners isagoo isbuucyada soo socda ku guuleysan doona kalsoonida jamaahiirta.
28 jirkaan ayaa haatan ku jira sanadka ugu dambeeya ee heshiiska uu kula joogo kooxda ka dhisan Emirates, waxaana uu u muuqday inuusanakda cusub ku biiroManchester City.
Wenger ayaa doorbiday inuu Sanchez ku soo bilaawdo kursiga keydka kulankii gurigooda maantaaykaga badiyay Bournemouth, markii uu kubada dhex dhigay daqiiqadii 75aad, waxaa lagu soo dhaweeyay taageerayaasha booska taageerayaasha.
"Alexis Sanchez wuxuu ku guuleysan doonaa taageerayaasha, waxa uu u soo laaban doonaa si dhaqso ah" ayuu Wenger u sheegay suxufiyiinta. "Waa in aan aqbalnaa jawaabaha dadka, habka ugu fiican ee aad ku heli karto dhinacaaga waa inaad sameysid.
"Waxa uu diirada u saaran yahay Premier League iyo Europa League, waxaana uu doonayaa inuu shaqo fiican qabto, weli jir ahaan waa uu xoognyahay si dhaqso leh ayuu u soo laaban doono,asiga oo heesta kalsoonida taageeryaasha.
Toddobaadkii la soo dhaafay Sanchez ayaa warbaahinta u gudbiyay inuu ku sigtay in uu ka baxo Arsenal.